I-AWSOS-P4: Ukuhlola Umthombo Ovulekile omkhulu futhi okhulayo we-AWS - Ingxenye 4 | Kusuka kuLinux
Kulokhu ingxenye yesine kusukela ochungechungeni lwezihloko ezikwi- «I-Amazon Web Services (AWS) Umthombo Ovulekile » Sizoqhubeka nokuhlola kwethu ikhathalogu enkulu futhi ekhulayo ye vula izinhlelo zokusebenza ithuthukiswe yi Ezobuchwepheshe Giant de «Ama-Amazon ».
1 I-AWSOS-P4: Umthombo Ovulekile we-Amazon Web Services (AWS) - Ingxenye 4
1.1.1 I-AWS SDK yeGo
1.1.3 Izimfihlo zeGit
I-AWSOS-P4: Umthombo Ovulekile we-Amazon Web Services (AWS) - Ingxenye 4
I-AWS SDK yeGo
“YiSoftware Development Kit (SDK) ye- Ama-Web Web Services (AWS) ngolimi lokuhlelwa kweGo. "
“Kwenza kube lula ukuhlanganisa i-Go apps ne-suite ephelele yezinsizakalo ze-AWS, kufaka phakathi i-Amazon S3, i-Amazon DynamoDB, i-Amazon SQS, nokuningi. Ngaphezu kwalokho, yenza kube lula ukusetshenziswa kwezinsizakalo ze-AWS ngokunikeza iqoqo lemitapo yolwazi abathuthukisi abasebenzisa i-Go abayithola inengqondo futhi beyazi. "
"Kusukela kulo nyaka ka-2021, inguqulo yayo engu-2.0 iyatholakala."
Note: Imininingwane eminingi mayelana I-AWS SDK yeGo ingatholakala kufayela le- I-Amazon Blog esemthethweni, njengakokulandelayo isixhumanisi.
"Njengamanje inguqulo yayo engu-3.0 iyatholakala."
"Insiza yesoftware evimbela amaphasiwedi nolunye ulwazi olubucayi ukuthi luthunyelwe endaweni yokugcina izinto ze-git lapho uxhumana nayo."
Note: Imininingwane eminingi ngalolu hlelo lokusebenza oluncane nolulula olubiziwe izimfihlo ze-git ingatholakala kufayela lakho le- iwebhusayithi ku-GitHub.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" kulokhu kuhlola kwesine kwe «AWS Open Source (AWSOS)», inikeza izinhlobonhlobo zezicelo ezivulekile nezinhlobonhlobo ezivulekile ezakhiwe yi-Technological Giant ye «Amazon»; futhi inentshisekelo nokusetshenziswa okukhulu, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-AWSOS-P4: Ukuhlola Umthombo Ovulekile omkhulu futhi okhulayo we-AWS - Ingxenye 4